Geofumadas, sawiro kaliya - Geofumadas
Egeomates, photos kaliya
Ogast, 2010 egeomates My, safarka
Muddo bil ah ayay ku adkaataa, laakiin waa ku qanacsan yihiin guulaha iyo xishoodka qoyska ee caruurtayda iyo gabadha indhahayga u ifaya. Isla marka aan awoodey inaan dhowr goor soo dhajiyo, halkan waa koob kooban oo sawir leh.
Nidaamka shahaadada ee karti-xirfadeedka.
Khibrad xiiso leh, samaynta habka shahaadada, bangiyada alaabta, imtixaanka farsamada, imtixaanka dhabta ah, si ...
... Ka fiiri hoos ka hooseeya illaa sare, saaxiibka ayaa eegaya. Inkasta oo aad arki karto illaa inta faraska lugta ka soo baxaysa.
5 oo ku saabsan dib-u-celinta ee aragtida.
Midkoodna maaha wax la taaban karo, laakiin aan laheyn moduleka Manifold GIS.
- Fiiri fila, bisha Sebtembar waxaan jeclaan lahaa inaan sii joogo ilaa lix farsamo yaqaan. Kuwa ugu fiican
- Haddii aad sii wadato liistooyinkaan midkoodna ma heli doontid. Waxaan kuugu xaqiijinayaa!
Diyaarinta fiidiyoowga waxbarashada ee cadastre.
Raadinta magaalooyinka oo leh saldhigga guud, miyiga leh GPS / compass, khariidad la Microstation, digitization card, dayactirka cadastoolka.
- Iska yaree!
- Yaa sheegay in la jaray?
- Way wanaagsanayd
- Waa kuma yahay agaasimaha?
Halkan qorista daraasadda, iyada oo buuxinaysa kaarka magaalo.
Waxaan rajeynayaa inaanan tegin farsamoyaqaanada Hollywood.
Labada malaa'igood oo yar yar oo leh joornaalka buluuga ah.
Dhexdhexaadinta wax walbaa, ma jirto wax ka fiican waqtigii tayada ee tayada kuwan ... hada waxay jecel yihiin inay xirtaan garbahooda.
... ma aha in marka dambe aysan rabin, waa in ay hore u miisaamaan wax badan ...
... Sanaddayda, ma ahan.
Way korayaan, waxay ku ciyaareysaa xabbado xabbo wali.
Mid ka mid ah Acer gacanta.
Tani waa mid aad u weyn.
Ma rabto in ay taabato qaar ka mid ah alaabada lagu ciyaaro, haddii aysan laheyn jiir.
Horay ayuu u sawirtaa sawirada uu u diro Facebook.
Haddii ay sii socoto si ay u koraan ... waxay si dhakhso ah u koraan oo aan lahayn xanuun badan.
Waxay ku koraan si dhakhso ah.
Haddii ay jiraan hal shey oo ay i jecel yihiin, waa raaxo ah in ay soo degaan aabaha Mexico oo leh nachos.
Maya wax badan oo hadda ah, kaliya shaqooyin badan.
GPS GIS kala cayncayn ah egeomates My
Post Previous«Previous Sida loo soo dejiyo faylka dgn / dwg
Post Next Kastamka degmada, qaabkani waa mid habboonNext »